VAOVAO OMALY - rov@higa
11 Septembre 2011, 12:39pm
Filoha RAVALOMANANA : "Aza manaiky atao fitaovana ianareo miaramila sao hanenenana any aoriana"
Nijabaka ny FATE (+vidéos)
Tsy afaka nivoaka ny vahoaka
Araky ny fanambarana natao teo amin'ny Kianjan'ny Finoana omaly dia tokony nivoaka an-dalam-be ny vahoaka mpandala ny ara-dalàana androany ka nihazo ny Kianjan'Ambohijatovo. Izany dia entina indrindra hitsapana na mitana ny teny nataony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny FATE na tsia. Misy manko ny iraka izay alefan'i TGV any amin'ny TROIKA nilaza fa efa omena malalaka haneho hevitra ny vahoakan'ny Ankolafy telo saingy tsy sahy satria tsy manana olona. Androany anefa dia voaporofo fa diso tanteraka izany.
Sary hery famoretana
FIS, GSIS, FIP, BC ireo hery vonjitaitra manokana ireo no niatrika ny vahoaka androany teny Behoririka ankoatran'ny EMMOREG. Nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika izy ireo ary nampihorohoro ny mpitolona izay vory lanona teo amin'ny Kianjan'ny Finoana sy ny manodidina. Tsy afaka nihazo an'Ambohijatovo arak'izany ny vahoaka saingy nandresy eo amin'ny sehatra diplomatika satria afaka nanaporofo fa tsy manaja ny zon'olombelona ny FATE.
Norobain'ny EMMOREG ny fanamafisam-peon'ny mpanao "Jazz"
Efa nentin'ny tahotra loatra ireto hery famoretana ireto ka zary nanao ny tsy fanao. Noheverin'izy ireo fa fanamafisam-peon'ny Ankolafy telo no najoro teo amin'ny Kianjan'Ambohijatovo ka dia nampiharany ny habibiany avy hatrany. Raha mbola teo am-pikarakarana izany ny teknisiana dia norofin'ireto mpanompon'i TGV ireto ny "sonorisation" tokony hanaovana fampisehoana "Jazz" teo amin'izany Kianjam-Ambohijatovo izany. Hiteraka olana ho an'ny FATE anefa ity tantara ity satria ny Foibe ara-kolontsaina Zermano-Malagasy no mpikarakara izany fampisehoana izany. Tsy misy tsy mahalala ny tsy fankatoavan'ny Alemana ny fanonganam-panjakana nataon'i TGV sy ny namany tamin'ny taona 2009 anefa izao tontolo izao.
Resin'ny hakingan-tsaina ny basy
Tsy nahaleo ny hakingan'ny mpitari-tolona ny herisetran'ny foza. Vao nambara fa hivoaka ny vahoaka dia iny tokoa fa nirodorodo ry "be bôty" isany. Toy ny any amin'ny tany miady mihitsy ka na ny saron-tava (cagoule) aza dia niseho masoandro. Misy lafiny maro anefa ny fomba mety handresena amin'ny ady lehibe iray. Ary tafalatsaka tao anaty velam-pandrika psikolojika sy adin'ny serasera ny FATE. Efa tapi-dalan-kaleha rahateo moa ka voatery mamono tena. Ankehitriny tsy nihestika tao an-kianja ny vahoaka mpandala ny ara-dalàna dia afaka nanaporofo amin'izao tontolo izao fa lainga marivo tototra ny fahalalahana maneho hevitra ambaran'ny FATE fa misy eto Madagasikara.
"Misy trondro vaovao hono eh ... foza orana no anarany"